Tun Tun's Photo Diary: June 2011
at 6/29/2011 07:54:00 AM Links to this post6comments:
We stayed 5N 6D is phuket, so we have quitealot of time to explore around Patong town. We even watched Movie (Inception) in Junceylon shopping mall. :) This is the Boxing Stadium beside Junceylon.
at 6/28/2011 06:08:00 AM Links to this post4comments:
at 6/27/2011 05:43:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Food, Indoor, Singapore, Wedding
at 6/25/2011 08:18:00 PM Links to this post2comments:
This church is located on 80 street x 35 street. It looks awesome, so I asked my driver to slow down the Motorcycle speed and tookafew shots.
at 6/25/2011 01:38:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Architect, Mandalay
at 6/24/2011 05:54:00 AM Links to this post2comments:
မန္တလေး ဘူတာကြီးက ရီမွန် လက်ဖက်ဆိုင်ပါ။ မန္တလေးမှာ အင်မတန်နာမည်ကြီး ၊ ဈေးလဲ ကြီး ပါတယ်။ စားလို.လဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အရောင်းဝန်ထမ်း ကောင်မလေး တွေလဲ အရမ်းကို ရက်ရောပါတယ်။
လက်ဖက်တင် မက အခြား မြန်မာအစား သောက် အကုန်ရောင်းတယ်။ ငရုတ်သီးကြော်၊ ဗာလချောင်ကြော် မြည်းကြည့်ရင်း ကောင်းလို.၀ယ်ခဲ့တယ်။ သက်သက်လွတ် အခြောက် အခြမ်း အကြော်တွေလဲ ရှိတယ်။ မုန်.တွေလဲ အစုံရှိတယ်။
ဒညင်းသီး လက်ဖတ် ၂၅သား။ ရူးရှဲ လက်ဖတ် ၁ ပိသာ နဲ. ပဲကြော် ၁ ပိသာ ၀ယ်ခဲ့တယ်။ စင်ကာပူမှာ စားဖို.ပါ။ လောဘကြီး သွားမှန်း နောက်မှ အမြင်မှန်ရ သွားလို. ရန်ကုန်မှာ ၂၅ သားလောက် ချန်ပေးခဲ့တယ်။
၁ သောင်းကျော်ဖိုး ၀ယ်လို. စိတ်ကြိုက် လက်ဖတ် အသေးလေး ၁ထုတ် နဲ. အဲ့ဒညင်းသီး အိုးထဲက ကြိုက်တာ ၄ လုံး နိုက်စေ တဲ့။ မစားရတာ ကြာလို.လားမသိ။ ဒညင်းသီးက ချိုချို နုနုလေး အရမ်းကို စားလို.ကောင်းပါတယ်။
ဆိုင်မှာ တင် တလုံး ။ဆိုင်ကယ် နောက်မှာ ဇိမ်နဲ. ထိုင်ရင်: ၂လုံး စား၊ ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့ သူ ပါးစပ် ထဲ နောက် ကနေ တလုံး ပစ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ သူက မန္တလေးမှာ အမြဲနေတဲ့သူပဲ တလုံးစားရရင် တော်ေ၇ာပေါ့။း)
အရီးတောင် လက်ဖက်ဆိုင်လဲ သွားသေးတယ်။ ပုံတွေ ဘယ်လိုမှ ပြန်ရှာမရတော့လို.။ ဒီ တဆိုင် ပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
at 6/22/2011 06:06:00 AM Links to this post2comments:
at 6/18/2011 08:08:00 AM Links to this post 1 comment:
at 6/17/2011 07:28:00 AM Links to this post2comments:
It isavery popular new Night Market in Mandalay located next to Yadanar Pon Market, so I called it Yadanar Pon Night market. There are so many food stalls and vegetable stalls.
When I was there, it was around 9pm and still gotafew stalls running. The amount of stalls are more than Zay Cho Night market.
In my opinion, Zay Cho Night market is influence with Burmese style and this Night market is influence with Chinese/ Shan Style. I really recommand you to visit and try variety of food there when you are in Mandalay.
Most of the food are shan foods and vegetables are look like directly come from Pyin Oo Lwin or Shan State. Some stall owner speak very poor burmese, they speak shan or chinese well.
Since it was quite late, I only have3photos to share. Hope you enjoy it.
at 6/16/2011 06:13:00 AM Links to this post No comments:
This photo is not taken by me. It was taken by one of my generous flickr friend, German Photographer, Mario Feierstein and I just want to share with you guy.
Of course, I get his permission to share on my blog.
This is the another photo of Myanmar note taken by me and I posted it before.
at 6/07/2011 06:16:00 PM Links to this post3comments:
at 6/04/2011 05:15:00 AM4comments: